Koeman oo ganaax la dul dhigay kaddib kaarkii roosaha uu qaatay kulankii xalay ee Granada… (Imisa kulan ayuu maqnaanayaa?) – Gool FM
Koeman oo ganaax la dul dhigay kaddib kaarkii roosaha uu qaatay kulankii xalay ee Granada… (Imisa kulan ayuu maqnaanayaa?)
(Barcelona) 30 Abriil 2021. Guddiga Tartamada ee Xiriirka Kubadda Cagta Spain ayaa ku dhawaaqay inay ganaax rasmi ah dul dhigeen macalinka reer Holland iyo kooxda Barcelona ee Ronald Koeman.
Granada ayaa xalay guul ka soo gaartay kooxda Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, Barcelona ayaa wali ku jirta booska saddexaad waxayna iska lumisay fursad ay kula wareegi laheyd hoggaanka horyaalka La Liga, iyadoo ay min 71 dhibcood wadaagaan Real Madrid oo booska labaad ku jirta.
Ronald Koeman ayaa qaatay kaarka roosaha oo toos ah, xilli kooxdiisa laga hoggaaminayay natiijada ciyaarta, maadaama uu la hadlay garsooraha afaraad, waxaana durba u yimid garsooraha dhex dhexaadinayay dheesha wuxuuna siiyay kaarka roosaha oo toos ah.
Wararka ayaa sheegaya in Ronald Koeman uu si qaldan ula hadlay garsooraha afaraad isla markaana uu aflagaadeeyay taasoo ka dhigtay in la ceyriyo isla markaana la ganaaxo.
Haddaba Ronald Koeman ayaa ka maqnaan doono kooxda Barcelona kulanka soo socda ay Valencia la ciyaari doonaan Axada, iyo sidoo kale kulanka Atletico Madrid ee todobaadka dambe sababo la xiriira ganaax la dul dhigay.
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 21-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Osasuna
Horudhac: Crystal Palace vs Manchester City... (Kooxda Sky Blue oo ku sii dhowaanaysa hanashada horyaalka Premier League)